Usoro ọkụ okporo ụzọ gbochiri ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị Briten ịga esenidụt
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Usoro ọkụ okporo ụzọ gbochiri ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị Briten ịga esenidụt
Na mwepụ nke amber tier, na-ahapụ naanị uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. A ka ga-ahụ ma mmegharị a ọ ga-etinye ntụkwasị obi n'etiti ndị Briten chọrọ ịga mba ofesi na ezumike.
Ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị Briten na-ata usoro ọkụ okporo ụzọ maka mkpebi ha ịghara ime ezumike esenidụt n'afọ gara aga, na-ekpughe nyocha nke WTM London wepụtara taa (Monday 1 November)
N'ime ndị na-agaghị mba ọzọ na ezumike n'ime ọnwa 12 gara aga, 66% zara 'ee' maka ajụjụ a: Usoro ọkụ okporo ụzọ nke gọọmentị UK webatara maka njem mba ofesi ewepụla gị ịga mba ofesi n'afọ gara aga?
Mgbe ewebatara ya, a na-eto usoro ọkụ okporo ụzọ dị ka ụzọ dị mfe nghọta maka gọọmentị iji nweta ọkwa ọkwa dịka ọnụ ọgụgụ Covid si kwuo, wee kpebie ma ndị na-abanye UK ga-anọrọ iche.
Agbanyeghị, enwere ọtụtụ oge ebe a na-atụgharị na amber ma ọ bụ ọbara ọbara, na-akpata ọgba aghara n'etiti ndị na-eme ezumike bụ ndị a na-enyekarị naanị awa 48 ma ọ bụ 72 iji laa n'ụlọ, ma ọ bụ ndị ga-akagbu atụmatụ ha. Na mgbakwunye, Gọọmenti webatara ọkwa mgbakwunye - ndepụta 'elele akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ', nke ebe a na-aga n'ihe egwu ịtụgharị na amber.
Ndị zara ajụjụ gwara ụlọ ọrụ WTM Industry Report ejighị n'aka ọkụ okporo ụzọ emela ka ha kwụsị njem n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga.
"Boris Johnson enweghị ike ikpebi n'obi ya site n'otu nkeji ruo na-esote mba ndị dị na ụdị agba. Ọ baghị uru ịga mba ọzọ ugbu a,” ka otu onye zara ajụjụ kwuru.
Onye ọzọ kọwara: "Achọghị m ịkwụ ụgwọ akụ maka ule COVID wee rapara n'ime ụlọ iche iche."
"Ọ na-agbanwe n'otu oge na ọ na-agbagwoju anya - Gọọmenti na-eme mkpọtụ na-amaghị ihe ọ na-eme. Boris si n'otu mkpebi echeghị echiche gaa na nke ọzọ, "onye ọzọ zara ya kwuru.
Nke anọ kọwara na usoro ọkụ okporo ụzọ kwụsịrị ha: "N'ihi na ha na-agbanwe usoro ahụ n'enweghị ọkwa ọ bụla ka ị nwee ike ịnọpụ iche na-enweghị ọkwa."
N'ime ndị fọdụrụ n'ime ndị Briten atọ bụ ndị na-emeghị ezumike esenidụt n'ime ọnwa 12 gara aga, ụfọdụ kwuru na ọ nweghị nchebe maka njem.
"Ọ dị oke egwu, yabụ ahọrọla ichere. Ọ bụghị usoro ọkụ okporo ụzọ, ọ bụ Covid kwụsịrị anyị, "otu kwuru.
Onye isi ihe ngosi WTM London Simon Press kwuru, sị: “Ebumnobi sistemu ọkụ okporo ụzọ ka ọ bụrụ ụdị dị mfe nke sistemu okporo ụzọ njem nke afọ 2020 - mana n'eziokwu, tụgharịrị bụrụ ihe mgbagwoju anya, ikekwe karịa.
“Ndị ụgbọ elu, ndị na-arụ ọrụ na ebe ndị na-aga na-enwe nkụja mgbe niile n'ihi enweghị mba dị na ndepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma mee ihe ngwa ngwa mgbe mba na-ebuli elu ma ọ bụ gbadaa akara ule okporo ụzọ, na-adịkarị obere oge.
“Na mgbakwunye, ndepụta ọkụ okporo ụzọ dị iche na ntuziaka Ofesi, Commonwealth na Development Office (FCDO) maka njem gaa otu ebe, yabụ ndị njem kwesịrị ịlele ha abụọ. Iji gbakwunye mgbagwoju anya, mba ndị nwere ndepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ abụghị, ma ọ bụ na ha abụghị, ghe oghe nye ndị Briten, yabụ sistemụ ahụ niile gosipụtara na ọ gbagwojuru anya.
"Site na mwepụ nke amber tier, na-ahapụ naanị uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. A ka ga-ahụ ma mmegharị a ọ ga-etinye ntụkwasị obi n'etiti ndị Briten chọrọ ịga mba ofesi na ezumike."